I-Enigma yeGumbi 622: IJoell Dicker's Thriller eNtsha | Uncwadi lwangoku
Imfumba yegumbi 622
UJuan Ortiz | 30/08/2021 16:25 | I-Biography, Iincwadi, Inoveli emnyama
Caphula ngo Joël Dicker.
Imfumba yegumbi 622 yinoveli yamva nje ngumbhali waseSwitzerland uJoël Dicker. Inguqulelo yantlandlolo yesiFrentshi yapapashwa ngo-Matshi 2020. Kwiinyanga ezintathu kamva yaboniswa ngeSpanish, kunye neenguqulelo zika-Amaya García Gallego kunye noMaría Teresa Gallego Urrutia. Njengemisebenzi yakhe yangaphambili, yi Thriller.
Nangona umlinganiswa ophambili enegama elifanayo njengombhali, ayisiyiyo ngobomi bomntu. Malunga, UDicker ugcina athi: “… kukho indawo encinci kum, kodwa andibalisi ngobomi bam, andizibali… ". Kwangokunjalo, umbhali wazinikezela ngokukhethekileyo kwinoveli: “Kumhleli wam, umhlobo kunye notitshala, uBernard de Fallois (1926-2018). Ndiyathemba ukuba bonke ababhali emhlabeni baya kudibana nomhleli ongaqhelekanga ngenye imini. "
1 Isishwankathelo seRiddle yeGumbi 622
1.1 Ukuqala konyaka
1.2 Ukudibana okuhle
1.3 Uthando oludlulayo
1.4 Yonke into yawa
1.5 Uhambo oluya kwiialps
1.6 Umbhali wommelwane
1.7 Inkqubela phambili yophando
2 Uhlalutyo lweRiddle yeGumbi 622
2.1 Idatha esisiseko yomsebenzi
2.3 UJoel dicker
3.1 Iincwadi zikaJoël Dicker
Isishwankathelo se Imfumba yegumbi 622
NgoJanuwari 2018, uJoel uhamba ixesha elinzima ebomini bakhe: UBernard de Fallois, umhlobo wakhe omkhulu kunye nomhleli, usweleke. Le ndoda yayingummeli ebomini balo mfana. Umtyala impumelelo yomsebenzi wakhe njengombhali, ke ugqiba kwelokuba amhlonele. Ngokukhawuleza, ubalekela eofisini yakhe ukuze abhale incwadi enikezelwe kumcebisi wakhe uBernard.
UJoël ngumbhali ozimeleyo; Ngapha koko, uhlala enxibelelana rhoqo nomncedisi wakhe othembekileyo uDenise. Nguye omkhuthazayo mihla le ukuba afumane umoya omtsha kunye nokuzilolonga. Ngenye imini xa ebuya ebaleka ngokungalindelekanga ungqubeka kuSloane, ummelwane wakhe omtsha. Nangona betshintshiselana nje amagama ambalwa, umfana uthathekile ngumfazi onomtsalane.
Ukusukela ngoko, UJoël wayenomdla wokwazi ngakumbi ngeSloaneKodwa wayengenaso isibindi sokumbuza. Ngobunye ubusuku bango-Epreli, ngamathuba nje, zihambelana nekhonsathi ye-opera, bayathetha kwaye emva kokugqiba isenzo baphume baye kwisidlo sangokuhlwa. Ukusuka apho, bobabini baphila iinyanga ezimbini zomnqweno onzulu wokuntywilisela uJöel kwinto ayithatha njengolonwabo olupheleleyo. Njengokudityaniswa, uye abe ngumlondolozi wendalo omvumela ukuba aqhubeke nencwadi ngembeko kaBernard.
Imfihlakalo ye ...
Yonke into yawa
Kancinci kancinci UJoël wagxila ngakumbi ekubhaleni kunokuchitha ixesha kunye nesithandwa sakhe. Ukudibana kwakwexeshana nje, okukhokelele ekuqhekekeni kolwalamano olubonakala lufezekile. USloane uthathe isigqibo sokuphelisa konke ngeleta ayishiya nomlondolozi wesakhiwo. I-idyll kaJoel yawa emva kokufunda ileta, ke ugqiba kwelokuba abaleke kwangoko kuloo ndawo ekhangela ukuzola.
Uhambo oluya kwiialps
Yileyo ndlela UJoël unyukela kwihotele edumileyo yasePalace eVerbier kwiiAlps zaseSwitzerland. Ekufikeni, iinkcukacha ezizodwa zitsala umdla wombhali: igumbi elo Babelwe ukuba uhlale ngama-621 kwaye enye edibeneyo ichongwa nge "621 bis". Xa bebonisana, bachaza ukuba ukubalwa kwamanani kungenxa yolwaphulo-mthetho olwenziwe kwiminyaka eyadlulayo kwigumbi lama-622, umsitho ongekasonjululwa.
UScarlett naye uhlala ehotele, umfundi wenoveli ohambe waya kuloo ndawo ukuya kucoca emva komtshato wakhe. Uphakathi kwigumbi le-621 bis, Kwaye xa wadibana noJoël wamcela ukuba amyalele ngezinye zeendlela zakhe zokubhala. Kwangokunjalo, umxelela ngemfihlakalo ejikeleze indawo ahlala kuyo kwaye amqinisekise ukuba aphande ngetyala ukuze alisombulule.
Inkqubela phambili yophando
Njengoko uphando luqhubeka, UJoël ufumanisa iinyani ezibalulekileyo malunga nokubulala. Ebusika ngo-2014 Abaphathi bebhanki yaseSwitzerland u-Ebezner babehlangene ehotele ukuze babeke umongameli omtsha weziko. Bonke bahlala eVerbier ngobusuku bokubhiyozela. Ngentsasa elandelayo wabonakala efile omnye wabalawuli: undwendwe kwigumbi 622.
Esi sibini sinesibindi sityhila iqela leemfihlo ezibakhokelela kumbulali. Yiyo le ndlela ubugcisa, iziza, ukungcatsha, oonxantathu bothando, urhwaphilizo kunye nomdlalo wamandla ojikeleze ubunkokheli bebhanki yaseSwitzerland.
Uhlalutyo Imfumba yegumbi 622
Imfumba yegumbi 622 Yenziwe ngu Amaphepha ayi-624, yahlulwe yaba Iindawo eziphambili ezi-4 iphuhlisiwe Izahluko ezi-74. Imbali yile kubalwa kumntu wokuqala nowesithathu, kunye nelizwi elilandisayo liyatshintsha phakathi kwabalinganiswa abahlukeneyo. Kwangokunjalo, kumaxesha aliqela iyelenqe lihamba ukusuka ngoku (2018) ukuya kwixesha elidlulileyo (2002-2003); oku ukuze wazi iinkcukacha zokubulala kunye nabantu ababandakanyekayo.
Kule ncwadi umbhali uchazile Iindidi zabalinganiswa eziyilwe kakuhle ezenzeka kulo lonke ibali. Phakathi kwabo, abalinganiswa bayo babalaseleyo:
Yabelana nombhali igama lakhe kunye nomsebenzi wakhe njengombhali. Waya kwiiAlps ukuze azicime emva kweziganeko ezibini ezibuhlungu. Apho, ngenxa yomfazi onomtsalane kwaye onomdla, waziphosa kuphando lokubulala. Ekugqibeleni, ufumanisa umbulali kwaye utyhila inkohlakalo enkulu ejikeleze ityala.
Yiyo umbhali ongenamava ukuba uthathe isigqibo sokuchitha iintsuku ezimbalwa ezahlukileyo eqhutywa kukwahlukana kwakhe emtshatweni. Uhleli kwigumbi elikufutshane noJoël Dicker, ke ngoko usebenzisa ithuba lokufunda ngobuchule balo mbhali udumileyo. Yena Iya kuba luncedo olukhulu ekuphandeni ukubulala okungummangaliso okwenzeka kwiminyaka eyadlulayo.
UJoel dicker Wazalwa ngoJuni 16, 1985 eGeneva, eSwitzerland. Ungunyana womthengisi weencwadi waseGeneva kunye notitshala ongumFrentshi. Uqeqesho lwakhe lwesikolo lwalukwidolophu yakhe, eCollège Madame de Staël. 2004 Ngaphambi kokungena eyunivesithi- waya kwizifundo zokubamba eParis unyaka wonke. Wabuyela eGeneva, kwaye Ngo-2010 wafumana isidanga somthetho kwiUniversité de Genève.
Kwiintsuku zakhe zokuqala njengombhali Uhlala kwi-anecdote enomdla al ukungafaneleki kukhuphiswano loncwadi lolutsha. UDicker wayichaza ingxelo yakhe Ingwe (2005), kodwa yaliwa kuba iijaji zazithathela ingqalelo ukuba ayinguye umdali womsebenzi. Waye wanikwa ibhaso lamanye amazwe lababhali abancinci abathetha isiFrentshi kwaye isicatshulwa sapapashwa kwi-anthology namanye amabali aphumeleleyo.
Kwakuloo nyaka ababhalise kwi-Prix des Ecrivains Genevois (ukhuphiswano lweencwadi ezingapapashwanga), kwinoveli Imihla yokugqibela yoobawo bethu. Emva kokuphumelela, wakwazi ukuyipapasha ngo-2012 njengomsebenzi wakhe wokuqala osesikweni. Ukusuka apho, umsebenzi wombhali unyukile. Okwangoku inezihloko ezine esele zikhona athengisa kwaye ngayo iphumelele ngaphezulu kwesigidi se-9 sabafundi.
Iincwadi zikaJoël Dicker
Imihla yokugqibela yoobawo bethu (2012)
Inyaniso malunga necala likaHarry Quebert (2012)
Incwadi yeBaltimore (2015)
Ukunyamalala kukaStephanie Mailer (2018)
Imfihlakalo yegumbi 622 (2020)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Imfumba yegumbi 622
EyoMsintsi. Ukukhethwa kweendaba zokuhlela